ခင်မင်းဇော်: August 2009
ကျမတို့ စုံတွဲ မနက်စောစော မုန့်စားထွက်ဖြစ်ရင် အမြဲ လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါကျ စကားက အဆက်မပြတ်ပြောဖြစ်ကြတာ ပုံမှန်ပဲ။ နေ့စဉ် ညဘယ်လောက်နက်နက် မနက် သားကိုကျောင်းပို့ဖို့ စောစောထရမြဲ။ ကျမက စားဖို့သောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးတာကို သားက စားပြီး မနက် ၇ နာရီခွဲတာနဲ့ သူ့အဖေက ကျောင်းလိုက်ပို့ရတာကိုး။
ကျောင်းပို့ပြီး ပြန်လာရင် မုန့်ဟင်းခါးစားမယ်ဆို မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်၊ နန်းကြီးသုတ်စားမယ်ဆို နန်းကြီးသုတ်ဆိုင်၊ တို့ဟူးနွေးဆို တို့ဟူးနွေး၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ကိုတော့ ထိုင်ဖြစ်တာ များတာပေါ့။ ကျမတို့ ၂ယောက်လုံးက မုန့်ဟင်းခါးကို လဘက်ရည် နဲ့ ပဲပြုတ်နံပြား၊ အီကြာကွေး လောက် မနှစ်သက်တာချင်းတူတာကိုး။ အဲဒီလို သွားတဲ့အခေါက်တိုင်း စကားတပြောပြောနဲ့ ဟိုလူက ဘယ်လို ဒီသတင်းဖတ်ပြီးပလား၊ ကြားပြီးပလား စသဖြင့် ရယ်စရာ မောစရာတွေရော သတင်းစကားတွေရော ပြောဖြစ်နေတာပဲ။ လမ်းလျှောက်ရင်း စကားမပြောပဲ ဒီတိုင်းသွားနေရတာလဲ အလုပ်မှမဟုတ်တာနော်။ အဲဒီအခါတိုင်း လမ်းတလျှောက်တွေ့တဲ့ လူတိုင်းက ဒီလင်မယား အိမ်မှာ စကားမပြောဖြစ်ကြလို့ လမ်းထွက်စကားပြောတာလားတဲ့။ ပြောစရာ မကုန်နိုင်ဘူးလားတဲ့။ အဲဒီလို ပြောတိုင်း ကျမတို့ ၂ယောက်က ရယ်မိကြတယ်။
တကယ်က ကျမတို့ အိမ်မှာဆိုရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရှေ့ ကိုယ်ထိုင်ပြီး ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေတာများတာပါပဲ။ ကျမက အပြင်များများထွက်ရသလို ကျမ အိမ်မှာ ရှိနေပြန်တော့လဲ သူကလဲ သူ့အလုပ်နဲ့ အပြင်ထွက်ရတာတွေ ရှိနေပြန်ရော။ တအိမ်ထဲမှာ မနက်စာ ထမင်းတူတူ မစားဖြစ်ကြသလို ညစာကိုလဲ ကြုံရာစားတာများလာလို့ ညစာတော့ တူတူစားရအောင်လို့ မနည်းစုစည်းထားရတာလေ။
တရက်တော့ အိမ်ကိုလာတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်က ကျမရော သူရော ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေကြတော့ သူ့နားတခါရပ် ကျမနားတခါရပ်ပြီး အော်ရယ်လိုက်တာ တဟားဟားပဲ။
သူ ကျမပီအေနားသွားရပ်တုန်းက တုန်ကနဲ ဆိုပြီး တက်လာတဲ့ ချက်ဘောက်မှာ လဘက်ရည်သွားသောက်ဦးမလား လို့ မေးတဲ့စာတန်း ထွက်လာတာတွေ့လို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကျမရဲ့ ခင်မင်းဇော် နာမည်နဲ့။
နောက် ကျမနောက်နား လာရပ်ပြီး ကြည့်တော့ ဗွီဒီယို အက်ဒစ် လုပ်နေတာကိုးလို့ တွေးမိတုန်း တုန်ကနဲ တက်လာတဲ့ ချက်ဘောက်က ကိုမင်းဇော်တဲ့။ နောက်နာရီဝက်လောက်ကျ သွားမယ်လေ ဆိုတဲ့ စာတန်းကို ဖတ်ပြီး သူမအောင့်နိုင်ပဲ တဟားဟား ရယ်တော့တာပဲ။ ဒီတော့မှ ကျမက သူ ကျမနောက်နားလာရပ်တာကို သိတော့တာ။
ဘာရယ်တာလဲ ပေါ့ မေးတော့မှ
ခင်ဗျားတို့ ၂ယောက်ကလဲ ပါးစပ်ကပြောတောင် ကြားနေတာကို စာရိုက်ပြောနေတာ ကျနော်ဖြင့် တကယ်ရယ်ချင်တာတဲ့။
ပါးစပ်က အသံထွက်ပြောရမှာ ပျင်းသွားလို့ ... စာပဲ ရိုက်လိုက်တော့တာ လို့ ကျမက ပြန်ဖြေတော့
ဒါ ခေတ်မှီ အိမ်ထောင်သည်တွေရဲ့ ဆက်ဆံရေး ဖြစ်သွားပြီထင်ပါတယ်တဲ့။
ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီး တကမ္ဘာလုံးက မိတ်ဆွေတွေနဲ့ စကားပြောနေရင်းက တအိမ်တည်းအတူနေသူချင်းက တဖြည်းဖြည်း ဝေးသွားဦးမယ်တဲ့။
သူက တွေးတွေးဆဆ ပြောပြတာမို့ ကျမတို့လဲ သေချာစဉ်းစားမိပြီး ဟုတ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်နေပြီဆိုပြီး နေမှုပုံစံသစ်ပြောင်းဖို့ ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့။
အဲဒါနဲ့ အစပိုင်းမှာ ရေးထားသလို ကျမတို့ အလုပ်မရှိတဲ့ နေ့တွေမှာ မနက်ပိုင်းတွေကို တူတူလမ်းလျှောက်အပြင်ထွက်ကြတယ်။ စကားတွေပြောကြတယ်။
သူ့ဆွေမျိုး ကိုယ့်ဆွေမျိုးအကြောင်း ......
သူ့မိတ်ဆွေ ကိုယ့်မိတ်ဆွေအကြောင်း ...
အလုပ်ထဲက မပြေလည်မှုတွေ ပြေလည်မှုတွေအကြောင်း......
ပြီးတော့ တယောက်လက်ကို တယောက်ဆွဲပြီး ရယ်စရာတွေကို တူတူရယ်မောခဲ့ကြတော့တယ်။
မိုးတွင်းကုန်ရင်တော့ ညနေပိုင်းတွေမှာပါ အချိန်ယူလမ်းလျှောက်ဦးမယ်လို့လဲ စိတ်ကူးထဲမှာ စီစဉ်ထားပါပြီ။
ကျမတို့နဲ့ တူတူလမ်းလျှောက်ကြမယ်လေ.... လိုက်မယ်မဟုတ်လားးး။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:17 AM 18 comments:
ဒီနှစ်ဘဘဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၅) နှစ်ပြည့် (ကျမတို့အိမ်မှာ ကျင်းပနေကျ ) ဆွမ်းကျွေးမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အခြေအနေ အခက်အခဲတွေကြောင့် ဘလော်ဂါ လမင်းခင်နဲ့ အတူ ဒီအထိမ်းအမှတ်ပွဲကို မပြုလုပ်နိုင်မှုအပေါ် စိတ်မကောင်းလဲ ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘဘဦးကြည်မောင်ဆိုတာ ကျမတို့ လေးစားအားကိုးတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦးပါ။ သူ့အကြောင်း ဆောင်းပါးလေး တပုဒ်ဖြစ်တဲ့ သူရဲကောင်းသို့ နှုတ်ဆက်ခြင်း ကို ကျမဘလော့မှာ တင်ပေးဖူးတာမို့ ဒီနှစ်လဲ အဲဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ပြန်ဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ီRest of your post
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:51 AM 1 comment:
ကိုယ်က တိတ်တဆိတ်လေးပဲ လွမ်းနေချင်တော့တဲ့သူပါ။
တကယ့်ကို အတွင်းစိတ်နဲ့အပြင်စိတ်ဆိုတာ ပါးပါးလျားလျားလေးပါလားးးးတဲ့။
ခပ်မာထန်ထန်အပြောကို ခေါင်းခါရင်း ကြိုက်စရာလား။ ဒီလူနဲ့ဒီလူ ဆိုတော့ အံ့သြတဲ့ မျက်ဝန်းကို သရုပ်ဆောင်ပြခဲ့သေးတာပဲ။
မျက်လွှာချပြီး တစ်ဖက်ကို လှည့်မိတယ်
သြော် ပုန်းရှောင်ခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့အလယ်)
နင်တော့ သိပ်ရိုင်းတယ်ဟာ။ အရက်သောက်တယ် လူလည်ခေါင်မှာလဲ ငါ့ကို လာရမ်းသေးတယ်…. နင်က ဘာဖြစ်နေတာလဲ… အဲဒီနင့်သူငယ်ချင်းကို ငါကမကြိုက်တာနဲ့ နင်က အရက်သောက်ရသလား……
(ဘာကြောင့်များလဲ နားမလည်စိတ်နဲ့ သံသယ မဖြစ်ပါနဲ့ အချစ်နှင်းဆီဖြူ…. ကိုယ့်မှာ နှလုံးသား….. မရှိတော့လို့ပါ……)
ညဘက်တွေမှာ အိမ်ရှေ့မှာ လာဆိုတဲ့ သီချင်းက အဲဒီတပုဒ်ကလွဲပြီး ဘာမှမရှိတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့….
နင်တို့ အုပ်စု ကြွက်နီတို့နဲ့ မခေါ်ဘူးဆို….
ငါပြန်လာတာပဲလေ.. ဒီနှစ်လဲ သီချင်းမဆိုဘူးဆို… သီချင်းတိုက်ပေးဖို့ အမှီပြန်လာတာ…
(..ပျော်ပျော်နေတာ အကောင်းဆုံးပဲ …..လာတခါလောက် ကလိုက်စို့
၀မ်းတူးသရီး ဟောဒီလိုရှိတ် ရော့အန်ရိုးးးးးးး)
ဒီညနင်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးပဲဟ …..
အလေ့အကျင့်ပဲ သိလား သေချာပြင်ဆင်….သေချာကျင့်ရင် ဘာမှမခက်ဘူး…
ဒါပေမယ့် စင်ပေါ်မှာ ငါ့ကို ပြန်မကြည့်ပါနဲ့….
တင်မျိုးလွင်…..ရစ်သမ်သမား ဂစ်တာကြိုးပြတ်သွားတယ် သိလိုက်လားးးးး ဟားဟား
(နောက်ကျိတဲ့ရေဟာ ရေကြည်တွေလို မပြတ်သားနိုင်
သြော် မဝေးရဲ မနီးရဲ..)
အဲဒါ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို မေးတာလဲ….
အော်.. ကိုအောင်နဲ့ မိုးသီတာ ယူလိုက်တော့ လူတွေက ငါတို့ အုပ်ကို တမျိုးထင်မလားလို့…
အလကားပါ… ပြောစရာရှိလို့… အားလုံးကိုပါ… ဒီနှစ်တော့ မိဘတွေဆီ လိုက်နေတော့မလို့
စုစု … နင်တို့အိမ်မှာ ထမင်းလာစားတုန်းကလေ နင့်အဖေက ငါ့ကို ဗေဒင်တွက်ပေးသေးတယ်..
ဟုတ်တယ် … သူက မင်းတနေ့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်မယ်တဲ့…
နင်က ယုံလို့လား… ငါ့အဖေပြောတာ..
ဟားဟား… မပြောဘူး…ဒါပေမယ့် နင်ကြိုက်လား အဲလိုဆို......
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို တက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး နင်ငါ့နောက် လိုက်လာတာ မဟုတ်လား စု…
မျက်စောင်းမထိုးနဲ့ … ခုနင်ထိုင်နေတာ ဦးချစ်ဆိုင် တဲ့ မှတ်ထား… ခု ဒီစားပွဲမှာ နင်ရယ် ငါရယ် ၂ယောက်ထဲနော်… သမီးရည်းစားရန်ဖြစ်တယ် ထင်ဦးမယ်..
မထင်ဘူး ဒီလိုဆုံရမယ်လို့ … ပျော်တယ်….
ဟုတ်တယ် ရင်တွေတုန်လွန်းလို့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြတော့ ကော်ဖီဖြတ်ခိုင်းတယ်။
ဒါဆို လဘက်ရည် ကျစိမ့် မှာလိုက်ပြီ….. ဒီနေရာက တောင်ငူကန်တင်းပေါ့။
နင်က သိပ္ပံသမား ဆိုတော့ ဒီဘက်မှာ လာထိုင်ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။
နင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ထိုင်မှာပေါ့… ဒီနေရာလေး ကောင်းသားပဲ…။
အေး… ခဏနေရင် ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်။
အဲဒါ…. ပန်းချီဆရာ မောင်ဒီ…။
အော် … ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်… ပြန်တော့မယ်…
နေဦး ငါလိုက်ပို့မယ်…. လှည်းတန်းထိပ်ထိ ပို့ဖို့ အချိန်ရပါတယ်ဟ…။
အောင်ဒူးဆိုတာ အော်ဂင်တီးတာလား… အင်း
ညီညီသွင် ဆိုတာ သီချင်းရေးတဲ့ တယောက်လား… အေး
မောင်ဒီဆိုတဲ့ လူကြီးက ပန်းချီရေးတယ် ပေါ့… အေးလေ…
အော်… ငါ့အဖေပြောတဲ့ လူ ဖြစ်ဖို့ နီးစပ်လာနေသလိုပဲနော်…
ငါသီချင်းဆိုဖို့ အသံသွင်းနေပြီလေ…. အဲဒါဖြန့်တောင်ဖြန့်တော့မယ် …
တနှစ်ကျော်ကျော်လေးမှာ တော်တော်ပြောင်းလဲသွားကြတယ်နော်… အခြေအနေကလေ..
နင်လဲ တိတ်ဆိတ်လှချည်လား စကားများက....
ဟဲ့ အဆောင်က အမကြီးကပြောတယ်..
ဖျာပုံသွားတုန်းက ယူသွားတဲ့ ပိုစတာတွေလေ သူ့ကို တခုပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လား…
အဲဒါသူက နင့်သူငယ်ချင်းသီချင်းခွေ ပေါက်တယ်တဲ့ သိလား။ ပြီးတော့ ညရောက်တော့ ကပ်ရပ်ခြံက အဲဒီသီချင်းခွေဖွင့်နေတာ ကြားတယ်။
အင်းးးး အဲဒါ နင်ကြိုက်လားးးး အဲဒီအခြေအနေလေ..
နင် အဆိုတော်ဖြစ်လာတော့ လူသိများလာရင် ရှက်စရာကြီးဟာ….။
ကိုယ့်မှာ နှလုံးသားမရှိတော့ လို့ပါ
သြော် ဘယ်သူ့ကံလဲ စဉ်းစားမိတယ်)
ဟမ်…. အေး ဈေးခဏလာတာ.. နင်ရော…
ငါနဲ့ ကြွက်နီနဲ့ နင်တို့ဈေးထဲဝင်လာတာတွေ့လို့ လိုက်လာတာ..
အော်… ကြွက်နီက ဘာလာလုပ်တာလဲ…နင်တို့ တော်တော်မျက်စေ့ကောင်းတယ်..
ငါနဲ့ ခဏလာနေတာလေ… နင်တယောက်လုံးတော့ မြင်ရမယ်လေ...
ဟင့်အင်း ခုတောင်ဈေးထဲက လူတွေ ကြည့်နေပြီ သွားတော့လေ ..
နင်က တော်တော်စိမ်းသွားပါလားးး တရုပ်မရဲ့….
သြော် … နှင်းဆီဖြူရဲ့ အဝေးက လူတစ်ယောက်ပါ)
အမ်မလေးးး လန့်တောင်သွားတယ် .. ဟုတ်တယ် အိမ်ခဏပြန်မလို့ ..
နေဦး ဒါ ကျနော့်သူငယ်ချင်းမပေါ့ ဒါကတော့…
သိပါတယ် အဆိုတော် အောင်ရင် မဟုတ်လားးးး
ချောင်းသာသွားမလို့… အဲဒါသင်္ဘောစင်းလုံးလိုက်ငှားလို့ ရလား လာစုံစမ်းတာ…
နင့်ကို မြင်လို့ ဒီဂိုဒေါင်ထဲ ၀င်လိုက်လာတာ ဟဟ..
အင်းးးး ဘာသွားလုပ်မလို့လဲ… အာ မမေးတော့ပါဘူးးးး
သြော် မဝေးရဲ မနီးရဲ)
နင် မြင့်မိုးရဲ့ ဂစ်တာသင်တန်းက ကောင်လေးတယောက်နဲ့ ဆို
စိတ်ဆင်းရဲရမယ် … မျက်စောင်းမထိုးနဲ့ အကောင်းပြောတာ…
သြော် ပုန်းရှောင်ခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့အလယ်)
အင်း နင့်ကောင်မလေးကို ခေါ်လာလေ.. ဟားဟား
ခေါ်ဖို့ ကောင်မလေးလား မလွယ်သေးဘူးလေ..
တကယ်က လူထင်ကြီးခံနေရတာ ဘယ်သူမှကြိုက်သူမရှိ…
ဟေ့ကောင် ရဲသွင်.. ဒီမှာ ကြည့်ထား ငါ့သူငယ်ချင်းက ထောင်ထွက်ကွ..
ဟဲ့ တိုးတိုးပြော .. နင့်မြင်တာနဲ့ ငါ့ဆိုင်ရှေ့မှာ လူတွေအုံလာပြီ..
ဒီမှာ လက်မှတ်ထိုးပေးပါဦးတဲ့ ကဲ … ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ဦးးး
သူကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ အကြိုအပို့ လုပ်နေရပြီ ..
၃၃ လမ်းထဲ ဘာလာလုပ်တာလဲ..
စာအုပ်တအုပ်ထုတ်မလို့ လုပ်နေတာ ….
အော်… လာလေ လိမ္မော်ရေ သောက်ပါဦးးး
အာ… အရက်တွေ ရောထားတယ် မဟုတ်လားးးး
တွေ့လား တရုပ်မကို ညာလို့ မရဘူးးးးး ဒါတွေကို ကြောက်တာ….
ငါမိန်းမကို နင်မမြင်ဖူးသေးဘူး … အိမ်လိုက်လည်ပါလားးးး
ဟင့်အင်းးး မသိချင်ပါဘူးးးး ရှင်းရှင်းပြောရင် မခင်ချင်ဘူးးးး နားလည်မလားးး
သြော် ပုန်းရှောင်ခြင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့အလယ်…)
အော်… ကလေးကျောင်းပို့ပြန်လာတာ…လာလေ အိမ်ထဲဝင် …
အင်းးး နင်တို့မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာရတယ်…
ဟုတ်တယ်… နင်မှတ်မိလားးး နင်၃၃ လမ်းမှာ ပြောခဲ့တာလေ… ငါ့မိန်းမကို မကြည့်ချင်ဘူး ဆိုတာလေ…
အင်းးးးး အဲဒီတုန်းကလေ လျှောက်ပြောတာပါ..
ပြီးတော့ နင် ငါ့သီချင်းတွေကို တခါမှ မဝေဖန်ဖူးဘူး.. နားရော ထောင်ရဲ့လားးး
နင်ခု အဆင်ပြေလားးး နင့်ယောက်ျားကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်ဟာ..
နင်လိုတာ ရှိလဲ ပြောလေ ငါ့ဖုန်းနံပါတ် အိမ်နံပါတ် နင့်ဆီမှာ အကုန်ရှိနေတာ တခါမှ ဖုန်းမဆက်ဖူးးးး
ဟုတ်လား ဘယ်တုန်းကလဲ ငါမသိပါလားး
နင့်မိန်းမနဲ့ ဆုံတယ် အပြင်သွားတယ်တဲ့.. ငါ့လဲ နာမည်မပြောခဲ့လိုက်ဖူး..
စု … သူဆုံးပြီ…
ဟိုတလောကပဲ ဖုန်းဆက်တယ် ဒီတခါ သီချင်းသွင်းတာ ပြီးရင် ပုသိမ်မှာ ကြာကြာလာနေမယ်တဲ့ သိလားး ပြောခဲ့တယ်….
(ပန်ဒိုရာ့ ကဗျာလေးတပုဒ်က ခေါင်းစဉ်နဲ့တင် ကျမကို ဖမ်းစားသွားခဲ့တယ်)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:04 PM 19 comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 8:31 PM3comments:
သိပ်အမှန်ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ထိန်းရဦးမယ်…...
မိုးရာသီ မျက်စိအလာဂျစ်(မိုးရေထိလို့မရဘူး မျက်လုံးယားတယ်။ ခု မျက်စဉ်းခပ်နေရတယ်။ အဲဒါကတော့ နှစ်စဉ်မိုးရာသီတိုင်း ခံစားနေကျ)...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက ထုတ်တဲ့……….၈ စက္ကန့်
အခမ်းအနား သာရေး နာရေး မသွားမဖြစ် ကိစ္စအ၀၀…..
သတင်းအတွက် စခရစ်(scrip)တွေ၊ အင်တာဗျုးအတွက် စခရစ်(scrip)တွေ
ဘလော့အတွက် ခု ဒီပို့စ်
ခုတလော ကဗျာမရွတ်မိဘူးးးး ဒါပေမယ့် ကဗျာတွေ့ရင် မဖတ်ရပဲ မနေနိုင်။
ဆိုင်ဟင်းနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေတာ ……
လုပ်ချင်တာမှန်သမျှ မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို…..
ပုသိမ်ကောလိပ်နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က သူငယ်ချင်းတွေ….
တကယ်မလုပ်ပဲ အာပွားနေတဲ့ လူတွေ……
ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာ ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တခု…
ကြည့်စမ်း ဒီနှစ်အတွင်း ငါတော်တော်အလုပ်တွေ ပြီးခဲ့ပါလားးးးးး...
ဒါ့ထက်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ရက်နဲ့ မကြိုးစားမိတဲ့ ငါပါလားးးးးး...
လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာ တစောင် ထုတ်ချင်တယ်…….
စောင့်ကြည့်ရအောင် စိတ်ဝင်စားရမယ့် အပတ်စဉ် တီဗွီအစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ဖြစ်ချင်တယ်။
နိုင်ငံကိုချောက်ထဲ တွန်းချနေသူ ဘဘကြီးတွေကို...
ခြံကျယ်ကျယ်ထဲက တထပ်တိုက်လေး တလုံးးးး
ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်နိုင်မယ့် အာဏာ……..
ကိုယ်ကျိုးရှာ အာရိုက်နေသူတွေကို မုန်းတယ်……
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်တတ်ဘူး။ ပေးပြီးသားဂတိကို အသက်နဲ့ ထပ်တူထိန်းချင်တယ်။ ပြီးတော့ သိပ်အညှိုးကြီးတတ်တယ်။
(ကိုဂျူလိုင် အတွက် အကြွေးဆပ်ပြီးသွားပါပြီ။ တန်ခူးကို တင်ထားတဲ့ ကြွေးတခု ရှိပါသေးတယ်၊ ဒီမှာပဲ ပူးရေးလိုက်ပါပြီ။ )
အနှစ် နှစ်ဆယ် တက်ထားတာလဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီအတွက် ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ မရေးဖြစ်သေးဘူး။
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးနဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကလေးကို လုပ်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း ပြန်နေချင်ပါတယ်လို့ပဲ အနှစ်နှစ်ဆယ် ဆန္ဒလေးကို ဖော်ထုတ်ပြသလိုက်မိပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ကြပြီး ၀ိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ပေး ကြရင် သိပ်ကောင်းမှာ……။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:13 PM 8 comments: